पाइलट बन्न के योग्यता चाहिन्छ ? कति लाग्छ खर्च ? हेर्नुस – Rapti Khabar
काठमाडौं । जहाज उडाउने पाइलट बन्न पूर्वयोग्यता के चाहिन्छ होला? यसको अध्ययन कहाँ हुन्छ होला? पाइलट बन्न पैसा कति चाहिन्छ होला?
यी जिज्ञासा धेरै विद्यार्थीमा हुनसक्छ। हामीले यस्तै प्रश्न पाइलट तालिमका लागि परामर्श दिने संस्था गीता एभिएसनका अध्यक्ष तथा सौर्य एयरलाइन्स क्याप्टेन पाइलट जनक अधिकारीलाई सोधेका छौं।
पाइलट अधिकारीसँग सेतोपाटीका रवीन्द्र शाहीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौंः
हवाइजहाज उडाउने पाइलट बन्न योग्यता कति चाहिन्छ नेपालको सन्दर्भमा?
पाइलटको तालिम लिन हरेक देशका आफ्नै मापदण्ड हुन्छन्। त्यसभन्दा पहिला विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्थाले पनि आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। आइकाओले उमेर र स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्व योग्यता तोकेको छ। त्यो पूरा हुनुपर्छ।
उमेरको कुरा गर्दा तालिम सुरू गर्दा १७ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। स्वास्थ्यका लागि नाक, कान र आँखा जाँच गराउनुपर्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिफारिस गरेका विशेषज्ञ डाक्टरले स्वस्थतताको सिफारिस दिनुपर्छ। त्यस्तै जनरल फिजिसियनको पनि सिफारिस चाहिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा शैक्षिक योग्यता प्लस-टु विज्ञान वा सो सरहको तोकिएको छ। त्यसमा फिजिक्स र म्याथ पढेको हुनुपर्छ। यो शैक्षिक योग्यता पूरा गरेकाहरूले तालिम लिन पाउँछन्।
तालिमका लागि नेपालमा व्यवस्था छैन। नेपालीले यसका लागि विदेश जानुपर्छ। मापदण्ड पूरा भएपछि तालिममा जानुभन्दा पहिला परामर्श भने नेपालमै दिइन्छ। पूर्व तयारीका रूपमा दिइने यस्तो सेवा हामीले पनि दिँदै आएका छौं। स्कुल छनौटदेखि लागतको तुलनासम्मका काम हामीले गर्छौं।
विदेशमा नेपालीहरू कुन देशमा जान्छन्?
नेपालीहरू दक्षिण अफ्रिकामा बढी जान्छन्। कति अमेरिका, फिलिपिन्स पनि जान्छन्। तर कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी भने लिएकै राम्रो हुन्छ। किनभने यो क्षेत्रमा नियमहरू पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्।
पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने पाइलट तालिमका लागि अरूमा जस्तो ‘चोर्ने’ मनसाय राख्नै हुँदैन। प्राक्टिकल त हो भनेर थ्योरी वेबास्ता गर्न पनि हुँदैन। आकाशमा उड्ने कुरामा सैद्धान्तिक ज्ञान पनि उत्तिकै चाहिन्छ। यी सबैका लागि कहाँ राम्रो छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
त्यस्तै नागरिक उड्डयन नियमन पनि उत्तिकै हेर्नुपर्छ। यी सबै कुरामा दक्षिण अफ्रिका राम्रो मानिन्छ। हवाई सुरक्षाको स्ट्यान्डर्डमा नेपाल अहिले भर्खर युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा जान खोज्दैछ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलेदेखि नै छ।
कुन देशमा लागत कति लाग्छ? त्यहाँको तालिमको गुणस्तर कस्तो छ भनेर हामीले परामर्श दिने काम गर्छौं। यी सबै कुरा बुझेर धेरैजसो नेपालीहरू आधारभूत तालिमका लागि दक्षिण अफ्रिका जाने गर्नु हुन्छ।
पाइलटको आधारभूत तालिमका लागि पैसा कति लाग्छ?
शुल्कको कुरा गर्दा फ्लाइङ स्कुल तथा देशअनुसार फरक छ। हामीजस्ता परामर्श दिने संस्थाहरूले नेपालमा यसको समग्र प्याकेज पनि दिने गर्छन्। हामी पनि त्यो गर्छौं।
मेरो अहिलेसम्मको अनुभव तथा अध्ययनमा लागत र तालिमको गुणस्तरका हिसाबले दक्षिण अफ्रिका राम्रो विकल्प हो। थ्योरी र प्राक्टिकलका हिसाबले त्यहाँको व्यवस्था एकदमै राम्रो मानिन्छ।
दोस्रो भनेको त्यहाँ जुन तालिम गराइन्छ, त्यो जहाजको मर्मत पनि राम्रो हुन्छ। अन्य देशका स्कुलको तुलनामा दक्षिण अफ्रिकामा २० हजार डलरसम्म सस्तो छ।
हामीले अहिले पठाउँदा पनि ४५ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (करिब ५४ लाख रूपैयाँ) मा खानाबाहेक अरू सबै लागतका लागि पठाइरहेका छौं। तर एउटा कुरा, जानुअघि यो सबै विवरण बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जानुभन्दा पहिला धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तो तालिमकै क्रममा इन्धनको मूल्य बढ्यो भने शुल्क बढ्ने खतरा पनि हुन्छ।
यस्ता कुराले बीचमै लागत बढाउछ कि बढाउँदै भनेर निश्चित हुनुपर्छ। अधिकतम शुल्क त ८० हजार डलरसम्म पनि हुन्छ।
सुरुआती तालिम गरेर आएपछि नेपालमा व्यावसायिक जहाज उडानका लागि गरिने तालिमको लागत एयरलाइन्स तिर्छन् कि पाइलटले?
सुरुमा आफैंले गएर गर्ने तालिम भनेको बेसिक सिपिएल तालिम हो। त्यो सामान्य लाइसेन्सका लागि गरिन्छ।
त्यो भनेको एउटा व्यावसायिक जहाज उडानका लागि योग्य भयो भनेको हो। तर एयरलाइन्ससँग फरक फरक कम्पनीका फरक किसिमका जहाज हुन्छन्। जस्तै कसैसँग सिआरजे, कसैसँग एटिआर छ। त्यो निश्चित जहाजको स्पिड भिन्न हुन्छ। उडाने तरिका फरक हुन्छ। त्यो फरक कुराका आधारमा फेरि तालिम लिनुपर्छ।
त्यसरी निश्चित जहाज उडनका लागि गरिने तालिमलाई हामी टाइप ट्रेनिङ भन्छौं र यो एयरलाइन्समा गएपछि नै हुन्छ। त्यो तालिम वास्तविक जहाभन्दा पनि स्युमिलेटरमा गरिन्छ। स्युमिलेटर पनि जहाजस्तै हुन्छ। एक्सिसमा मुभ हुन्छ। निजीमा यो तालिम लिन आधारभूत पढाइ जत्तिकै लागत लाग्छ। त्यसको लागत एयरलाइन्स र पाइलटबीचको सम्झौतामा भर पर्छ। कति एयरलाइन्सले तिर्छन् भने कतिले आफैं गर्छन्। त्यो तालिम सकाएर आएपछि बल्ल जहाज उडान मिल्छ।
सिपिएल गरेपछि हामीले एउटा लाइसेन्स लिन्छौं जुन जेनरल लाइसेन्स हुन्छ। त्यसपछि हाम्रोमा हरेक छ महिनामा पिपिसी गर्छौं। पाइलटलाई कुनै पनि विपत अवस्था आउँदा उसले काम गर्न सकोस् भनेर रिफ्रेस हुन यो तालिम गरिन्छ। देशअनुसार लाइसेन्सको म्याद हुन्छ। हाम्रोमा पाँच वर्षका लागि मान्य हुन्छ।
नेपालमा कति पाइलट जागिर नपाएर बसिरहेका छन् भनिन्छ। यस्तो कसरी हुन्छ?
कोरोनाअघि त्यस्तो अवस्था थिएन। कोरोनापछि हवाइ यात्रा रोकियो। त्यहीकारण यो बीचमा थपिएका र कतिपय पुराना पनि बेरोजगार भएका हुन सक्छन्। यो त अन्य क्षेत्रमा पनि भएको छ। तर हवाई यात्रा सामान्य अवस्थामा पुगेर विस्तार भयो भने फेरि अवसर खुल्ने छन्।
पाइलटको अवसर तथा कमाइ कस्तो हुन्छ?
नेपालको कुरा गर्दा अन्य पेसाको तुलनामा पाइलटको कमाइ राम्रै छ। यो विश्वव्यापी सीप हो। यसमा अवसरको कुनै कमी हुने कुरा भएन। विदेशमा अवसर पाए त झन् राम्रो आम्दानी हुन्छ। नेपालमा सामन्यतया अहिले सुरूआतमै एक लाख रूपैयाँभन्दा माथि हुन्छ। पहाडतिर उडाउनेको १० देखि १५ लाखसम्म पनि हुन्छ। यसमा कम्पनीअनुसार फरक हुन्छ।
एयर होस्टेसका लागि तालिम कसरी र कति लागतमा हुन्छ?
एयर होस्टेसका लागि निश्चित आवश्यकता भन्ने हुन्न। तर तालिम गरेपछि एयरलाइन्सको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ। पढ्न त जसले पनि पाउँछ तर हरेक एयरलाइन्सले आफ्नै नियम बनाएका हुन्छन्। कसैले उमेरमा बनाउँछन् त कसैले तौल, उचाइ र योग्यतामा। कम्पनीले निकालेको भ्याकेन्सीअनुसार योग्यता हेर्नुपर्छ।
यसको तालिम नेपालमा हुन्छ। हामीले पनि गराइरहेका हुन्छौं। सिधै जहाजमा गएर काम गर्न भने पाइँदैन। कुन जहाज हो, त्यो अनुसार एयरलाइन्सले छुट्टै तालिम दिन्छ। तालिमको ३ महिनाको हुन्छ, ३६ हजारमा हामीले दिइरहेका छौं।
यसमा प्रायः प्लस-टु पास गरेकाहरू आउनु हुन्छ। क्याबिन-क्रु तालिम भनेको जहाजमा उड्न मात्र होइन। अन्त काम गर्नेहरू पनि आफ्नो सीप र कौशल विकासका लागि यो तालिम लिन आउनुहुन्छ। कमाइ र कामका हिसाबले एयर होस्टेसको अवस्था कस्तो छ?
नेपालमा राम्रै छ। यसको न्यूनतम सुरुआती तलब नै २५/३० हजार रूपैयाँ हुन्छ। भत्ता तथा अन्य कुरा पनि जोडिँदा राम्रै आम्दानी हुन्छ। -सेतोपाटीबाट
आज २०७७ भदौ ३० गते मंगलबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
आज २०७७ भदौ ३० गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुँनाले शरिरले […]